Wasiirka Howlaha guud ee XFS oo faah faahiyay heshiisyo ay la soo saxiixdeen madaxda dalka Maroco | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Howlaha guud ee XFS oo faah faahiyay heshiisyo ay la soo...
Wasiirka Howlaha guud ee XFS oo faah faahiyay heshiisyo ay la soo saxiixdeen madaxda dalka Maroco
Muqdisho(SNTV) Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska Xukuumadda Soomaaliya Mudane C/fataax Maxamed Ibraahim Geesey oo shir jaraaid ku qabtay xafiiskiisa magaalada Muqdisho ayaa faah faahin ka bixiyay shir uu uga qeybgalay dalka Maroco isaga iyo wafdi uu hoggaaminaya.
“waxaan rabaa in aan faah faahiyo safar muhiim ah oo aan ku tagnay dalka Maroco,halkasi oo aan uga qeybgalnay shir looga hadlayay arrimo ay kamid yihiin maamulka howlaha guud,tayaynta shaqaalah,shirkaasi waxaan ku soo bandhignay halka ay Soomaaliya mareyso,runtii waa nalaku ammaanay dal ahaan iyo wasaarad ahaanba,waxaan la kulanay madaxda wasaaradaha aan wadashaqeynta naga dhexeysa,waxaan soo kala saxiixanay heshiis wada shaqeyn oo ah in aan iska kaashano dhinacyo badan sida dib u dhiska”. Ayuu yiri Wasiir Geesey.
Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Xukuumadda Soomaaliya mudane C/fataax Maxamed Ibraahim Geesey ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in Soomaaliya ay waxbadan ka faaidi doonto heshiisyada ay la soo saxiixdeen madaxda dalkaasi iyo kuwo kale caalami ah,iyo sidoo kale ka qeybgalka shirkaasi.
Previous articleWar-murtiyeed: Shirka shanaad ee Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee DFS, D/Goboleedyada iyo G/Banaadir oo soo xirmay
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo faray Barlamaanka Soomaaliya in ay kaalintooda sharci ka qaataan hirgelinta Hay’adda Qaran ee Naafada